မဟန ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဘာလုပ်မှာလဲ? | MoeMaKa Burmese News & Media
သံဃာတွေကို အာဏာပိုင်တွေက ဘယ်လိုသဘောထားတယ်ဆိုတာရှင်းနေပါပြီ။ အရှက်ရစရာဖြစ်နေပါပြီ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးရွှေမန်းကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေကိုနားထောင်ပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေပြီလို့ကြားသိရပါတယ်ဘုရား။ ဆရာတော်ကြီးတွေအနေနဲ့လည်း တပည့်သံဃာတွေရဲ့ အသံတွေကိုနားထောင်ပြီး အရှိကို အရှိအတိုင်း၊ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း သတ္တိရှိရှိနဲ့ ပြောဆိုဖို့ အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း လျောက်ထားပါတယ်ဘုရား။ ။
3 Responses to မဟန ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဘာလုပ်မှာလဲ?
မစိုးရိမ်ရဟန်း on February 13, 2012 at 2:47 pm
၀ီရသူရေးတဲ့ မဟနအကြောင်းဆောင်းပါးနဲ့ ဆက်စပ်ဖတ်ကြည့်ရင် ပိုပြီး ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။
ခင်မောင်သန့် on February 14, 2012 at 6:01 pm
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့(မဟန)ကို သူ့ရဲ့ လက်ကိုင်ဒုတ်လောက်ပဲ သဘောထားတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်။ အထူးသဖြင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတာ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမကို ၁၀၀% ယုံကြည်သက်ဝင်သူတွေသာ လုပ်ကိုင်သင့်တဲ့ ဌာနမျိုးပါ။ အခုတော့ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမတွေကို ၁၀၀% မျက်ကွယ်ပြုပြီး၊ အမြင်ကပ်ပုဒ်မလို ဟာမျိုးတွေ လုပ်နေကြတာကတော့ သာသနာအနာဂါတ်အတွက် အတော်ကို ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေပါ။ ဗုဒ္ဓဟာ သာသနာတစ်ခုလုံးရဲ့ ကိုယ်စားပြု အကြီးအကဲဖြစ်သလို ဗမော်ဆရာတော်ကြီးဟာ မဟနတစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ ကိုယ်စားပြု အကြီးအမှုးဖြစ်တယ်။
သာသနာရေးမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေ ဥပဒေတွေပဲရှိရှိ ဗမော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ မဖြစ်မနေ အသိအမှတ်ပြုပေးသင့်မယ်။ အသိအမှတ် ပြုပေးရမယ်။ သာသနာရေးဝန်ထမ်း ပီသစွာ ဗြမ္မစိုရ်တရား လက်ကိုင်ထားပြီး ပညာရှိဆန်ဆန် သိမ်မွေ့စွာ ဖြေရှင်းသင့်တယ်။
ရွှေည၀ါဆရာတော်ကို မှန်တာမှားတာ ခဏဘေးဖယ်ထား၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အခုလုပ်ရပ်ကြောင့် မဟနရဲ့ ရပ်တည်မှုဟာ သူတို့ရဲ့ စေရာသွား၊ ခိုင်းတာလုပ် ဘွဲ့တံဆိပ်ကပ်ရင်လက်ခံ ဘာမှအတွန့်မတက်နဲ့ ဆိုတဲ့ ပုံစံဖြစ်စေသလို၊ ထေရ်ကြီးဝါကြီး ဆရာတော်တွေပါဝင်တဲ့ မဟနရဲ့ သိက္ခာကို အောက်ဆုံးကိုဆွဲချပြပြီး သူတို့ရဲ့ အာဏာဟာ မဟနရဲ့ အထက်မှာ ရှိနေတယ်လို့ အသေအချာ ခြိမ်းခြောက်တပ်လှန့်လိုက်တာပါ။ သာသနာကို အကြောင်းပြုပြီး အာဏာယစ်မူးချင်သူတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ၊ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ဖော်ဆောင်နေတဲ့ လမ်းစဉ်နဲ့ ပြဒါးနဲ့သံလို တခြားစီဖြစ်နေပြီဆိုတာကို မောဟအမိုက်အမှောင်က အားကြီးလွန်းတော့ မြင်နိုင်စွမ်း မရှိရှာကြတော့ဘူး။
ခုလိုလုပ်ရပ်မျိုးတွေမှာ စိတ်ပါလက်ပါ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ကြတဲ့ အဓမ္မ သာသနာရေးဝန်ထမ်းတွေ နောက်ဘ၀မကူးခင် ဒီဘ၀မှာတင် ထောင်ကျတာတွေ၊ အသေဆိုး အဖြစ်ဆိုးတွေကြုံတွေ့ရတာတွေ မျက်မြင်တွေ့နေရတော့ သူတို့အပေါ် သနားမိတယ်။ ကိုယ်ပြုတဲ့ကံအတိုင်း ကိုယ်ပြန်ခံရတာ ဓမ္မတာပါ။
မှတ်ချက်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အတွင်းကလှိုက်ပြီး ဖျက်ဆီးမယ့် အစွန်းရောက် ဘာသာခြားတွေက သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ နေရာတစ်ခုရအောင် စနစ်တကျ အချိန်ယူ ဗုဒ္ဓဘာသာအသွင်ယူ ဟန်ဆောင်ပြီး သာသနာကို မြေလှန်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာမျိုး ဖြစ်နေမလားလို့ သံသယ၀င်မိတယ်။
မောင်သစ္စာ on February 14, 2012 at 9:11 pm
အခုကိစ္စအတွက် ရွှေည၀ါဆရာတော်ရော မဟနဆရာတော်ကြီးတွေရော နှစ်ဖက်လုံးမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
ရွှေည၀ါဆရာတော်ဘက်က အားနည်းချက်ကတော့ မန်းဒီချုပ်ရုံးမှာ တရားမဟောမီကတည်းက တရားဟောခွင့် ပိတ်ထားတာ ဖြစ်လို့ ပိတ်ထားတဲ့ ကာလအတွင်း ဆက်ဟောနေတာရယ်၊ မဟနဆရာတော်ကြီးတွေကို တောင်းပန်လျှောက်ထားရာမှာ စာပို့တာလောက်သာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်ကြွရောက်ပြီး မတောင်းပန်မိတာရယ် ဒါတွေဟာ ဆရာတော်ဘက်က အားနည်းချက်လို့ မြင်တယ်။
မဟနဘက်ကတော့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီးဖွင့်ပြီး သာသနာပြုနေတာကိုမှ ငဲ့ကွက်မှု မရှိတာရယ်၊ ရွှေည၀ါကို ပင့်ခေါ်ပြီး ဆရာတပည့်တွေလို ရင်းနှီးစွာ ပြောဆိုဆုံးမပြီး အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ပါလျက် မလုပ်ကြတာရယ် ဒါတွေဟာ ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ အားနည်းချက်လို့ မြင်တယ်။
နောင် ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်မလာအောင် အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကတော့ မဟနအဖွဲ့ကြီးကို သာသနာတော်အတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့၊ ပရိယတ် ပဋိပတ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဆရာတော်ကြီးများဖြင့် အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းဖို့ပါ။
လက်ရှိ လေးနှစ်တစ်ကြိမ် ၂၅ရာခိုင်းနှုန်း အဟောင်းအသစ် လဲတဲ့ စနစ်ကို ပြင်ဆင်ပြီး တစ်ဖွဲ့လုံး သက်တမ်းပြည့်ရင် ပြန်လည်ရွေးချယ်တဲ့ စနစ်ကို ကျင့်သုံးဖို့ပါ။
ဒါတွေ အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိကြတဲ့ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို အားမရဘဲ ဖြစ်နေကြတဲ့ ဆရာတော်များအားလုံးက လက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းအခြေခံစည်းမျဉ်းတို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတို့ စတဲ့စတဲ့ စာအုပ်တွေကို ၀ါသနာပါသည် ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ သေသေချာချာ ဖတ်ရှု၊ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ မကိုက်ညီတော့တာတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်အောင် စုစုစည်းစည်းနဲ့ တောင်းဆိုကြမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်နိုင်ကောင်းရဲ့လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။